Ruzivo - Huizhou Olink Technology Co., Ltd.
Ruzivo rwekutanga rwemotokari wiring sunga
Zvemotokari wiring sunga
Mota wiring sunga (mota wiring sunga) inoziva kubatana kweiyo magetsi magetsi uye akasiyana magetsi zvikamu pamotokari. Iyo wiring tambo inogoverwa kwese pamusoro pemotokari. Kana injini ichienzaniswa nemoyo wemota, saka iyo wiring sunga iyo neural network system yemota, inova inoona nezvekufambiswa kweruzivo pakati pezvikamu zvakasiyana zvemagetsi zvemota.
Kune mhando mbiri dzehurongwa hwekugadzira mota wiring sunga
(1) Yakakamurwa nenyika dzeEuropean neAmerica, kusanganisira China, TS16949 system inoshandiswa kudzora maitiro ekugadzira.
(2) Zvikurukuru muJapan: Toyota, Honda, vane yavo system yekudzora maitiro ekugadzira.
Dzemotokari wiring sunga vagadziri vane yavo yakasarudzika uye vanonamira kukosha kune tambo yekugadzira ruzivo uye tambo mutengo kudzora. Iyo yepasi hombe tambo sunga zvirimwa zvinowanzoenderana newaya netambo, senge Yazaki, Sumitomo, Leni, Guhe, Fujikura, kelop, Jingxin, nezvimwe.
Pfupi sumo yezvinhu zvakajairika zvemotokari wiring sunga
1. Tambo (yakaderera voltage waya, 60-600v)
Mutsetse wepasi rose: QVR, QFR, QVVR, qbv, qbv, nezvimwe
Kumaka kwemazuva ese: AV, AVS, AVSS, AEX, AVX, cavus, EB, TW, she-g, nezvimwe
Kumaka kwechiGerman: flry-a, flry-b, nezvimwe
Mutsetse weAmerica: Sxl, nezvimwe
Iwo akajairwa maratidziro iwaya ane mazita ezita rechikamu che0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 4.0, 6.0 mativi mamirimita
Iyo sheath (rabha goko) inowanzo gadzirwa nepurasitiki. Kondakita weakadzvanywa terminal anoiswa mukati mayo kuti ave nechokwadi chekuvimbika kwekubatana. Mashoko acho anonyanya kusanganisira PA6, PA66, ABS, PBT, PP, nezvimwe
Chinhu chakaumbwa chakaomarara, chakakomberedzwa netambo kuti ubatanidze tambo dzakasiyana kuti dzifambise masaini, anosanganisira echirume, echikadzi chinongedzo, chindori chinorira uye chinetenderedzwa chiteshi, nezvimwe.
Izvo zvakakosha zvinhu ndezvendarira uye zvendarira (kuomarara kwendarira kwakadzikira zvishoma pane kweyendarira), uye ndarira nhoroondo huru.
2.Sheath accessories: Yemvura isina bhaudhi, bofu plug, yekuisa chisimbiso mhete, kukiya ndiro, clasp, nezvimwe
Inowanzo shandiswa kugadzira chinongedzo ne sheath terminal
3. Kubudikidza negomba rabha zvikamu zve waya sunga
Iyo ine mabasa ekupfeka kuramba, isina mvura uye yekuisa chisimbiso. Inonyanya kugoverwa pamubatanidzwa pakati peinjini nechati, iko kusangana pakati pekamuri rekumberi uye iyo tekisi (kuruboshwe uye kurudyi zvachose), chinongedzo pakati pemasuo mana (kana musuwo wekumashure) nemota, uye tangi remafuta inlet.
Yekutanga, inowanzo gadzirwa nepurasitiki, inoshandiswa kubata tambo yewiring mumotokari. Kune zvisungo, bhero rekuvhara zvisungo.
5. Pipe zvinhu
Yakakamurwa mupombi yemarata, PVC kupisa inopisa shrinkable pombi, fiberglass pombi. Rakarukwa nyere, ichitenderera pombi, nezvimwewo Kuchengetedza wiring sunga.
Kazhinji, inenge 60% kana yakatowanda mvuto inoshandiswa mukusunga bundle. Chinhu chikuru chakanakira kupfeka kuramba, kupisa kwakanyanya kupisa, kudzora murazvo uye kupisa kupisa kwakanaka kwazvo munzvimbo yepamusoro tembiricha. Kupisa kwekushisa kwemhepo ndeye - 40-150 ℃. Zvinyorwa zvaro zvinowanzo kuve zvakakamurwa kuita PP uye pa2. PA iri nani pane PP murimi kudzora uye kupfeka kuramba, asi PP iri nani pane PA mukukotama kuneta.
Function Iko kushanda kwePVP kupisa inodzikira pombi yakafanana neiyo yeyeti pombi. PVC pombi inochinjika uye kukotama deformation kuramba kwakanaka, uye PVC pombi inowanzovharwa, saka PVC pombi inowanzo shandiswa pabazi re harness bend, kuitira kuti iyo waya ishanduke shanduko. Iko kupisa kupisa kusagadzikana tembiricha yePVP haina kukwirira, kazhinji pazasi pe80 ℃.
Dhizaini tepi: ronda pamusoro peiyo waya sunga. (yakakamurwa kuita PVC, sponge tepi, jira tepi, bepa tepi, nezvimwewo). Tepi yekuzivikanwa kwemhando yepamusoro: yaishandiswa kuonesesa kuremara kwezvigadzirwa.
Iyo tepi inoita basa rekusunga, kupfeka kuramba, kuputira, kudzora murazvo, kudzikisira ruzha, kumaka uye mamwe mabasa muhombodo yewaya, iyo inowanzo kuve neinenge 30% yezvinhu zvinosunga. Kune matatu marudzi etepi yewaya tambo: PVC tepi, mhepo flannel tepi uye jira base tepi. PVC tepi ine yakanaka yekupfeka kuramba uye murazvo kudzora, uye kwayo kupisa tembiricha ingangoita makumi masere, saka kudzikisira ruzha kuita kwayo hakuna kunaka uye mutengo wayo wakaderera. Izvo zvinhu zveflannel tepi uye jira base tepi chipfuwo. Iyo flannel tepi ine yakanakisa yekusunga uye yekudzora ruzha mashandiro, uye iko kupisa tembiricha ingangoita 105 ℃; iyo tepi yemucheka ine yakanakisa kupfeka kuramba, uye iyo yakanyanya tembiricha yekudzivirira ingangoita 150 ℃. Izvo zvakajairika zvakaipira flannel tepi uye jira base tepi ndeye yakashata murazvo kudzora uye yakakwira mutengo.
Kuziva kwemotokari wiring sunga
Dzemotokari wiring sunga
Dzemotokari wiring sunga ndiyo huru muviri wemotokari wedunhu network. Pasina wiring sunga, hakuzove nemotokari wedunhu. Parizvino, ingave mota yemhando yepamusoro kana mota yehupfumi, iyo tambo yekusungira yakangofanana, iyo inoumbwa newaya, zvinongedzo uye yekumonera tepi.
YeMotokari waya inonzi zvakare yakaderera-voltage waya, iyo yakasiyana neyakajairika waya waya. Yakajairwa imba waya ndeyemhangura imwe yepakati waya, iine humwe hurema. Tambo dzemotokari ndedzemhangura dzakawanda dzemukati dzinochinjika waya, dzimwe dzacho dzakaonda sebvudzi. Dzakati wandei kana dzakatowanda tambo dzemhangura dzakapfava dzakaputirwa mumapombi akaomeswa epurasitiki (PVC), ayo akapfava uye asiri nyore kupaza.
Izvo zvakajairika kutaurwa kwetambo mumotokari wiring sunga dzinosanganisira waya dzine zita remuchinjikwa-chikamu chikamu che0,5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 4.0, 6.0, nezvimwe. yemidziyo yakasiyana yekushandisa simba. Tora mota sunga semuenzaniso, 0.5 yakatarwa mutsetse unoshanda kune chiridzwa mwenje, chinongedzo rambi, musuwo mwenje, siringi mwenje, nezvimwe. 0.75 yakatarwa mutsetse yakakodzera rezinesi ndiro yemwenje, kumberi uye kumashure mashure marambi, brake mwenje, nezvimwe. 1.0 yakatarwa mutsara wakanakira mwenje wekutenderedza mwenje, mwenje wemhute, nezvimwe. 1.5 yakatarwa mutsetse yakakodzera headlamp, runyanga, nezvimwe; main simba tambo senge jenareta armature waya, yekumisikidza waya, nezvimwewo inoda 2.5-4mm2 waya. Izvi zvinongoreva mota yakajairika, kiyi inoenderana neyakanyanya kukosha ikozvino mutoro. Semuenzaniso, iyo yepasi tambo yebhatiri uye yakanaka simba tambo inoshandiswa zvakasiyana kune mota dzemotokari. Iwo waya madhaimendi akakurisa, angangoita anopfuura gumi mativi emamirimita. Idzi waya dze "Big Mac" hadzizobatanidzwe muhusungwa hukuru.
Usati waronga iyo tambo tambo, iyo wiring tambo dhizaini inofanirwa kudhonzwa pamberi, izvo zvakasiyana nedunhu redhisheni dhizaini. Dunhu schematic dhayagiramu chifananidzo chinotsanangura hukama pakati pezvikamu zvakasiyana zvemagetsi. Icho hachiratidze mabatirwo emagetsi akabatana, uye hachikanganiswi nehukuru uye chimiro chechinhu chimwe nechimwe chemagetsi uye nhambwe iri pakati padzo. Iyo wiring tambo dhizaini inofanirwa kufunga nezve saizi uye chimiro chechinhu chimwe nechimwe chemagetsi uye nhambwe iri pakati padzo, uye zvakare kuratidza mabatirwo emagetsi emagetsi.
Mushure mekunge wehunyanzvi weiyo wiring sunga fekitori yagadzira iyo wiring sunga wiring bhodhi zvinoenderana neiyo wiring harness dhizaini, mushandi achacheka waya newaya zvinoenderana nemirau yeiyo wiring bhodhi. Iko tambo huru yemotokari yese inowanzo kuve yakakamurwa kuita injini (kuvesa, EFI, kugadzira simba, kutanga), chiridzwa, kuvheneka, kutonhodza mweya, midziyo yemagetsi yekubatsira uye zvimwe zvikamu, kusanganisira main harness uye bazi harness. Ngoro huru yemotokari ine yakawanda yebazi wiring sunga, senge muti wedanda uye bazi. Iyo pani yechiridzwa ndiyo yepakati chikamu chekusunga kukuru kwemotokari yese, iyo inotambanuka ichidzoka neshure. Nekuda kwehukama hurefu kana gungano rinoreruka uye zvimwe zvikonzero, iyo wiring simbi yemimwe mota yakakamurwa kuita musoro tambo (kusanganisira chiridzwa, injini, pamberi pechiedza gungano, air conditioner, bhatiri), kumashure tambo trunk rambi), denga rekusimudza (musuwo, siringi mwenje, runyanga rwekurira), nezvimwewo kumagumo eiyo harness anoiswa mucherechedzo nenhamba uye tsamba kuratidza chinongedzo chetambo. Anoshanda anogona kuona kuti chiratidzo chinogona kunyatso sunganidzwa newaya dzinoenderana nemagetsi zvigadzirwa, izvo zvinonyanya kubatsira kana uchigadzirisa kana kutsiva tambo. Panguva imwecheteyo, ruvara rwewaya rwakakamurwa kuita rumwe ruvara mutsetse uye kaviri kara mutsetse. Chinangwa chevara chakatsanangurwawo, izvo zvinowanzove zvakajairwa zvakagadzwa nemugadziri wemotokari. Maindasitiri eChina zvirevo zvinongoreva chete iro hombe ruvara, semuenzaniso, imwechete nhema dema inoshandiswa kumisikidza waya, tsvuku monochrome inoshandiswa kune tambo yemagetsi, isingagone kuvhiringidzwa.
Waya sunga yakaputirwa newaya waya kana epurasitiki tepi. Zvekuchengetedza, kugadzirisa uye kugadzirisa zviri nyore, yakarukwa waya yekumonera yabviswa. Ikozvino yakaputirwa neanamatira epurasitiki tepi. Chidimbu kana giragi rinoshandiswa kubatanidza pakati pebhanhire uye harness uye pakati pezvisungo nemagetsi zvikamu. Iyo yekubatanidza inogadzirwa nepurasitiki uye ine plug uye soketi. Iyo wiring harness inosunganidzwa netambo harness nechuma, uye iko kubatana pakati pechisimba uye zvemagetsi zvikamu zvakabatana nechunhu kana lug.
Nekuwedzera kwebasa remotokari uye nekushandiswa kwakawanda kwemagetsi ekudzora tekinoroji, zvinowanda zvemagetsi magetsi, waya dzakawanda uye waya, uye tambo yewaya ichawedzera uye inorema. Naizvozvo, mota yemhando yepamusoro yakaunza iyo CAN bhiza kumisikidza, inoshandisa iyo multiplex transmission system. Zvichienzaniswa neyakajairwa wiring sunga, iyo nhamba yewaya uye zvinobatanidza zvakaderedzwa zvakanyanya, izvo zvinoita kuti wiring ive nyore.